FAQs – Fortune Broadband
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ကူညီနိုင်သလဲ?
မေး ။ ။ ဖိုင်ဘာအင်တာနက် ဆိုတာ ဘာလဲ
ဖြေ။ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဖိုင်ဘာချိတ်ဆက်မှု ( FTTH) ဆိုတာ ပိုမြန်ဆန်၊ ပိုလိုင်းအားကောင်းပြီး အကန့်အသတ်မဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ရှိတဲ့ စံနှုန်းမြင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုပါ။ လိုင်းဆွဲအားမငြိမ်မှာ မစိုးရိမ်ရတဲ့အပြင် အသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်ဘာကြိုးတွေဟာ သာမန် copper ကြိုးတွေထက် ၄.၅ ဆ ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ broadband နည်းပညာတွေ အားလုံးထဲမှာ FTTH က အမြန်ဆုံး ဖြစ်နေရတာပေါ့။
မေး ။ ။ Fortune Broadband အသုံးပြုဖို့ ဘယ်လို စာရင်းပေးသွင်းရသလဲ
ဖြေ။ ။ စာရင်းဖြည့်စွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရောင်းပြခန်းတွေမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်သုံးအတွက်ဆိုရင် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ် မိတ္တူ ဒါမှအဟုတ် passport မိတ္တူလိုအပ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံးအတွက်ဆိုရင် ခွင့်ပြုစာ (authorization letter) ပါဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်အရောင်းပြခန်း ဟာ အဆောင်(၁၂)၊ MICT Park ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မှာ တည်ရှိပါတယ်
မန္တလေးအရောင်းပြခန်းကတော့ အမှတ် ၁၁၇၊ ၃၄ လမ်း၊ ၇၇x ၇၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး မှာပါ။
မေး။ ။ မှတ်ပုံတင်ပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်လိုင်း စ သုံးလို့ ရမလဲ
ဖြေ။ ။ တပ်ဆင်ကြေးနဲ့ နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းပြီး ၂ ပတ်ကနေ ၃ ပတ်အကြာမှာ တပ်ဆင်ချိတ်ဆက်ပြီး အသင့် ဖြစ်နေမှာပါ။
မေး ။ ။ Fortune FTTH ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ သုံးစွဲနိုင်ပြီလား
ဖြေ ။ ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ FTTH ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာသာ ပေးနေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ရက်ကို နေပြည်တော်နဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးထိ ဖြန့်ကျက်သွားဖို့လည်း အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပါတယ်။
ရန်ကုန်အတွက်တော့ ဒီ မြို့နယ် ၁၇ ခုမှာ broadband ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေပါတယ်။
လမ်းမတော် ကြည့်မြင်တိုင် တောင်ဥက္ကလာပ ကမာရွတ်
လသာ သင်္ဃန်းကျွန်း ဒဂုံ စမ်းချောင်း
ပန်းဘဲတန်း အလုံ လှိုင် မြောက်ဥက္ကလာပ
ဗဟန်း တာမွေ မြောက်ဒဂုံ
မေး ။ ။ စာရင်းပေး မှတ်ပုံတင်ဖို့ အတွက် ဘာတွေကို ယူလာရမလဲ
ဖြေ။ ။ အိမ်သုံးအတွက်ဆိုရင် နိုင်ငံသားကတ် ဒါမှမဟုတ် passport မိတ္တူလိုအပ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းအတွက်သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ကုမ္ပဏီ စာရင်းသွင်းလွှာ (company registration) လိုအပ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လစဉ်သုံးစွဲခ အပြင် တခြား ပေးဆောင်စရာတွေ ရှိသေးလား။
တပ်ဆင်ကြေး ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ကေဘယ်ကြိုးအရှည်အတိုအလိုက်ကောက်ခံတာတွေ ရှိပါတယ်
မေး ။ ။ လိုအပ်တဲ့ ကေဘယ် အရှည်ကို ဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ
ဖြေ ။ ။ သင့်အိမ်နဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရာ ဌာနကနေ သင့်အိမ်က modem အထိ အကွာအဝေးနဲ့ တိုင်းပါတယ်
မေး ။ ။ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်ကို ပမာဏကန့်သတ်ထားတာ ရှိလား?
ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က unlimited data ဝန်ဆောင်မှုပေးတာမို့ သင် ရရှိ/ ပေးပို့တဲ့ data ပမာဏကို မကန့်သတ်ထားပါဘူး။
မေး ။ ၊ ONT ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူက ဘအလုပ်လုပ်လဲ?
ဖြေ ။ ။ ONT ကို modem လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ သူက Termination Point (TP)ကို ဖိုင်ဘာကြိုးန
ကြ ချိတ်ဆက်ပြီး သင့် router ကိုတော့ LAN / Ethernet ကနေတဆင့် ချိတ်ဆက်ပါတယ်။ ONT ဟာ သင့် TP က ဖိုင်ဘာကြိုးတွေက အချက်အလက်တွေကို သင့်router ဖတ်နိုင်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် အချက်ပြမှုတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြပေးပါတယ်။
မေး ။ ။ Fortune Broadband နဲ့ Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်မှာလား?
ဖြေ။ သုံးနိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ONT ဟာ Fortune Broadband ကို သင့်အိမ် နေရာအနှံ့မှာ သုံးနိုင်ဖို့ Wi-Fi ပေးနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Q:မေး။ ။ Fortune Broadband ကို ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် router နဲ့ သုံးနိုင်မလား?
ဖြေ။ ။ သုံးနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် Fortune ရဲ့ ONT စက်နဲ့တော့ ချိတ်ဆက်ထားဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
မေး ။ ။ Fiber Broadband အသုံးပြုဖို့ ဘယ်လို router အမျိုးအစားတွေ အသုံးပြုသင့်လဲ?
ဖြေ။ ။ သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူ ၁၀ ဦးထက် ပိုမယ်ဆိုရင်တော့ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ router တွေကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
မေး ။ ။ Wi-Fi နဲ့ ချိတ်လိုက်ရင်ရော ကြိုးနဲ့ ချိတ်ထားသလို အင်တာနက်နှုန်းမြန်ဆန်နေမှာလား?
ဖြေ။ ။ Wi-Fi ကော်နက်ရှင်က ကြိုးတန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာ ထက်တော့ နှေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ONT ကတော့ ပိုမိုလိုင်းအားငြိမ်သက်တဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးနေမှာပါ။
မေး ။ ။ အင်တာနက် လိုင်းမရဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ?
ဖြေ။ ။ ပထမဆုံး သင့် modem က ခလုတ် မီး ဘာအရောင်ပြနေသလဲ စစ်ဆေးပါ
သင့်ရဲ့ PON မီးအရောင်က အစိမ်းရောင် ပြနေသင့်ပါတယ်။ LAN မီးရောင်နဲ့ Power မီးရောင်ကလည်း အစိမ်းရောင်ကို ပြနေသင့်ပါတယ်။
မီးအစိမ်းတွေချည်းပဲ မြင်နေရမယ်ဆိုရင် Modem ကို ၅ မိနစ်လောက် ပိတ်ပြီးမှ ပြန်ဖွင့်ပါ ။ အင်တာနက်နဲ့ ပြန် ချိတ်ဆက်ကြည့်ပါ။
မီးနီ မြင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာ ရှိနေပါပြီ။ modemနဲ့ ကွန်ပျူတာကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကြည့်ပါ။
< modem နဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဘယ်လို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မလဲ >
– သင့်ကွန်ပျူတာ control panel ထဲက network and sharing center ကို click နှိပ်ပါ
(၁) သင့် desktop ညာဘက်ထောင့်က “ Network Icon” ကို right click ခေါက်ပ်
(၂) “ Open network and sharing center” လို့ ပေါ်လာရင် အဲဒီကို နှိပ်ပါ
(၃) ” set upanew connection or network” ကို click နှိပ်ပါ
(၄) အင်တာနက်နဲ့ Broadband ကို ချိတ်ဆက်ပါ (PPPOE – triple P O E).
(၅) သင့် contact မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ password နဲ့ username ကို ဖြည့်စွက်ပါ
(၆) connect ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး မိနစ် နည်းနည်းစောင့်ပါ
၁။ error code 691 username နှင့်/သို့မဟုတ် password မှားနေသည်
၂။ error code 651 modem သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာတွင် ချို့ယွင်းမှု ရှိနေသည်
၃။ LDS မီးနီ ပွင့်နေပြီး အင်တာနက် အလုပ်မလုပ်သေးပါ။
ဖော်ပြချက်bသို့မဟုတ် c ရရှိပါက ကေဘယ် ချို့ယွင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
Modem နှင့် ကွန်ပျူတာကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက ပြန်လည် စမ်းကြည့်ပါ
သင့်မှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေသေးရင် ကျွန်တော်တို့ ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ site code နဲ့ contact number တွေ ပေးပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရ ဲ့နည်းပညာရှင်တွေက နောက်ထပ် ၃ ရက်အတွင်းမှာ လာရောက်ပြုပြင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ လာရောက်ပြုပြင်ဖို့အတွက် ခေါ်ဆိုရင် နှုန်းထား တစ်စုံတစ်ရာ ပေးဆောင်စရာလိုပါသလား?
ဖြေ။ ။ လာရောက်ပြုပြင်ဖို့အတွက် ခေါ်ဆိုရင် ၅,၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်ပါမယ်။
တခြားနှုန်းထားတွေကတော့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာတွေပေါ် မူတည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အင်တာနက်လိုင်းက ဘာကြောင့် အရမ်း နှေးရတာလဲ?
ဖြေ။ ။ သင့်ရဲ့ browsing speed ကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ setting ချိန်မှားနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ/လက်ပ်တော့ကို modem နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။ www.speedtest.net မှာ သင့်ရဲ့ browsing speed ကို စစ်ဆေးပြီး လိုသလို ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှု plan များ
မေး ။ ။ Fortune မှာ အင်တာနက် package ဘယ်နှစ်မျိုးလောက် ရှိလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့မှာ 1 Mbps၊ 2Mbps၊4Mbps ၊8 Mbps၊ 10 Mbps နဲ့ Night Plus Weekend Package Plan ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ Package အားလုံးဟာ unlimited data တွေ ချည်းပါပဲ။
1Mbps ကို ၂၅,၀၀၀ ကျပ်
2Mbps ကို ၄၀,၀၀၀ ကျပ်
4Mbps ကို ၆၀,၀၀၀ ကျပ်
6Mbps ကို ၇၅,၀၀၀ ကျပ်
8Mbps ကို ၉၀,၀၀၀ ကျပ် အသီးသီး ကျ သင့်ပါတယ်။
Night Plus Weekend Package ရဲ့ စျေးနှုန်းတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မေး ။ ။ Night Plus Weekend ရဲ့ စျေးနှုန်တွေက ဘယ်လိုရှိလဲ?
ဖြေ။ ။ Night double package စျေးနှုန်းတွေက
8Mbps ကို ၉၀,၀၀၀ ကျပ် အသီးသီး ကျသင့်ပါတယ်။
မေး ။ ။ Night plus weeekend နဲ တခြား plan တွေ ဘာကွာလဲ?
ဖြေ။ ။ သင်ဟာ night plus weekend package plan ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီးရင် နောက်တစ်နေ့ ည နဲ့ စနေတနင်္ဂနွေရက်တွေမှာ သင့်ရဲ့ အင်တာနက် မြန်နှုန်း ဟာ ၂၀၀ % ထိ မြင့်တက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ဒီနေ့ 1Mbps ဝယ်လိုက်ရင် နောက်တစ်နေ့ ည ၈နာရီနဲ့ မနက် ၈ နာရီကြားနဲ့ စနေတနင်္ဂနွေမှာ 2Mbps ရရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ Night Double Package ဘယ်လို ပြောင်းသုံးရမလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sales center တစ်ခုခုစီ လာပြီး request form ကို ဖြည့်သွင်းပေးရမှာပါ။ အဲဒီလ လကုန်မှာ သင့်ရဲ့ package က ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
မေး ။ ။ ငွေပေးဆောင်မှုတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို လုပ်နိုင်မလဲ?
ဖြေ။ ။ အဆောင် ၁၂ ၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်ကို လာရောက်ပြီး ကနဦးကျသင့်ငွေကို ပေးဆောင်ရမှာပါ။ ကျန်တဲ့ လစဉ် ကျသင့်ငွေတွေကို KBZ ဘဏ်၊ CB ဘဏ်နဲ့ AYA ဘဏ် ခွဲတွေမှာ ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
လစဉ်ကြေးပေးဆောင်ရာမှာ သင့်ရဲ့ customer invoice ကို မပျက်မကွက် ယူဆောင်လာခဲ့ပေးပါ။
မေး ။ ။ Customer invoice ကို ဘယ်အချိန်မှာ ထုတ်ပေးလဲ?
ဖြေ။ ။ လစဉ်လတိုင်းရဲ့ ပထမ သို့မဟုတ် ဒုတိယပတ်မှာ ထုတ်ပေးပါတယ်။
မေး။ ။ အင်တာနက် bill အတွက် ဘယ်လို တွက်ချက်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ONT တပ်ဆင်ချိန်က စလို့ ရက်သုံးဆယ် (၁လ)ထိ ရေတွက်ပြီး တွက်ချက်ပါတယ်။
မေး။ ။ invoice အတွက် ငွေနောက်ဆုံးဆောင်ရမယ့် ရက်က ဘယ်ရက်လဲ?
ဖြေ ။ ။ ငွေနောက်ဆုံးဆောင်ရမယ့် ရက်ကို invoice မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ bill စာ ရွက် ထုတ်ပေးပြီး ရက် ၃၀ အကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လစဉ် bill တွေကို ဘယ်ကို ပို့ပေးမှာလဲ?
ဖြေ။ ။ လစဉ်ငွေကောက်ခံလွှာတွေကို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အိမ် လိပ်စာအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လစဉ်ငွေကောက်ခံလွှာ မရသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ ပို့ဆောင်ရေး စနစ်မှာ အခါအားလျော်စွာ ကြာမြင့်ချိန်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ငွေကောက်ခံလွှာတွေဟာ ဒုတိယ လ မှာ ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဘယ်လို ငွေပေးဆောင်မှု စနစ်တွေ အသုံးပြုပြီး ပေးဆောင်နိုင်မလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငွေပေးဆောင်မှုစနစ်တွေကတော့ အသုံးပြုပြီးမှ ပေးဆောင်ရတဲ့ စနစ်တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြိုတင် ငွေပေးချေမှုတွေကိုလည်း လက်ခံပါတယ်
မေး ။ ။ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု စနစ်နဲ့ ဘယ်လို ပေးနိုင်မလဲ?
ဖြေ။ ။ ကြိုတင် ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်တော့ MICT Park ၊ အဆောင် ၁၂ မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရုံးမှာပဲ ပေးဆောင်ထားနိုင်မှာပါ။
ကြိုတင် ငွေပေးချေမှုအတွက် အခုလို လျှော့စျေးအစီအစဉ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
တစ်နှစ်စာ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုအတွက် ၁၅%
၆လစာ ကြိုတင်ငွေပေးဆောင်မှုအတွက် ရ% နဲ့
၃လစာ ကြိုတင်ငွေပေးဆောင်မှုအတွက် ၃% လျှော့စျေး ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ နှစ်စဉ်ကြေးဟာ ဒီလျှော့စျေးအစီအစဉ်မှာ မပါဝင်ပါဘူး။
မေး ။ ။ ငွေကို ကြိုသွင်းထားပေမယ့် invoice က ဘာလို ရောက်လာတာလဲ?
ဖြေ။ ။ ငွေကို ကြိုသွင်းထားပေမယ့် ငွေတောင်းခံလွှာ ရောက်လာတာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စနစ်က အသုံးပြုပြီးမှ ငွေချေတဲ့ စနစ် ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ ဒီ ငွေတောင်းခံလွှာဟာ ငွေလက်ကျန်ရှင်းတမ်းသဘောမျိုးသာ ဖြစ်ပြီး ထပ်မံပေးဆောင်ဖို့ မလိုပါဘူး။
မေး ။ ။ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုနေတာကို ရပ်ထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ငွေပေးသွင်းဖို့ လိုနေတာလဲ?
ဖြေ။ ။ ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ဖုန်းက တဆင့်လှမ်းပြောပီး လုပ်မရလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဌာနချုပ်ကို လာရောက်ပီး ရပ်ဆိုင်းတဲ့ ပုံစံ form ကို ဖြည့်စွက်ရမှာပါ။ အဲဒီမှသာ ငွေကောက်ခံတဲ့ ဌာနချုပ်က သင့်ရဲ့ အသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းခြင်းကို လက်ခံပြီး ငွေကောက်ခံမှုတွေကို ရပ်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ Plan ပြောင်းလဲ သုံးစွဲခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း
မေး ။ ။ နေရာပြောင်းရွှေ့ှုတဲ့အခါမှာ ငွေကြေးထပ်မံပေးဆောင်ဖို့ လိုပါသလား?
ဖြေ ။ ။ နေရာပြောင်းရွှေ့ကြေးကို အခုလို ပေးဆောင်ရမှာပါ
၁။ တစ်ခန်းထဲ/ အဆောက်အအုံတစ်ခုတည်းကို ပြောင်းရင် ၂,၅၀၀၀ ကျပ်
၂။ မြို့နယ်တစ်ခုတည်း၊ exchange တစ်ခုတည်းကို ပြောင်းရင် ၅,၅၀၀၀ ကျပ်
၃။တခြားမြို့့နယ်၊ တခြား exchange ကို ပြောင်းရင် ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၄။နေရာ ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကေဘယ်ကြိုး တစ်မီတာအရှည်ကို ၄၀၀ ကျပ်
နေရာပြောင်းရွှေ့သုံးစွဲမှု မစခင်မှာ သင့်ရဲ့ ပေးဆောင်စရာရှိတဲ့ ငွေတွေကို ပေးဆောင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှသာ နေရာပြောင်းရွှေ့သုံးစွဲမှု အသက်ဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ နေရာပြောင်းရွှှေုမှုအတွက် ဘယ်လို လျှောက်ထားရမလဲ?
ဖြေ။ ။ အဆောင် ၁၂ ၊ MICT Park ၊ လှိုင်မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရုံးချုပ်ကို လာပြီး နေရာပြောင်းမှုအတွက် လျှောက်လွှာလာတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ် မိတ္တူ၊ ဒါမှမဟုတ် passport မိတ္တူကိုပါ ယူလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား လာရောက်လျှောက်ထာားမှာဆိုရင်တော့ ခွင့်ပြုစာ၊ တပ်ဆင်ခြင်း စာချုပ်နဲ့ ပိုင်ရှင်ရဲ့ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ် မိတ္တူ/ passport မိတ္တူ ယူလာဖို့ လိုပါတယ်။
မေး ။ ။ စာချု့ပ်ပေါ်က ပိုင်ရှင်အမည်ကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲနိုင်မလဲ။?
ဖြေ။ ။: နာမည်ပြောင်း form မှာ ဖြည့်သွင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရုံးကို လာခဲ့ဖို့ လိုမှာ ဖြစ်ပြီး အိမ်သုံးအင်တာနက်သမားတွေအတွက် နိုင်ငံသားကတ်/passport မိတ္တူ နဲ့ လုပ်ငန်းသုံးအင်တာနက်သမားတွေအတွက် ခွင့်ပြုစာ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ပြောင်းကြေး ၂၅,၀၀၀ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ Plan တွေ ပြောင်းလဲသုံးစွဲမယ်ဆို ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ?
ဖြေ။ ။ Plan သတ်မှတ်ချက် form မှာဖြည့်သွင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရုံးကို လာခဲ့ဖို့ လိုမှာ ဖြစ်ပြီး အိမ်သုံးအင်တာနက်သမားတွေအတွက် နိုင်ငံသားကတ်/passport မိတ္တူ နဲ့ လုပ်ငန်းသုံးအင်တာနက်သမားတွေအတွက် ခွင့်ပြုစာ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ပြောင်းကြေး ၂၅,၀၀၀ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဝန်ဆောင်မှု ဘယ်လို ရပ်ဆိုင်းရမလဲ?
ဖြေ။ ။ ဝန်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်းကို လတိုင်းရဲ့ ပထမ အပတ်မှာ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ပထမတစ်ပတ် ပြီးမှ လာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်းတွေကိုတော့ နောက်လရဲ့ ပထမ ပတ်မှာ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း form မှာဖြည့်သွင်းဖို့နဲ့ ငွေကြေးအပြီးသတ်ပေးချေမှုတွေလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရုံးကို လာခဲ့ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံသားကတ်/passport မိတ္တူယူလာဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်ကနေ တဆင့် ရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်ပြုစာ၊ တပ်ဆင်ခြင်း စာချုပ်နဲ့ ပိုင်ရှင်ရဲ့ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ် မိတ္တူ/ passport မိတ္တူ ယူလာဖို့ လိုပါတယ်။
မေး။ ။ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လို ပြန် စ တင်နို်င်မလဲ?
ဖြေ။ ။ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရုံးကို လာပြီး ပြန်လည် အသုံးပြုကြောင်း form ကို ဖြည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ် မိတ္တူ/ passport မိတ္တူ ယူလာဖို့ လိုပါတယ်။ form ဖြည့်သွင်းတဲ့ ရက်က ၂ ရက်အတွင်း အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။